Kobo Libra H2O, iyo-inotenderera yeReaders iyo iwe yaunoverengera kwese kwaunoenda | Gadget nhau
Kobo Libra H2O, iyo-inotenderera yeReaders iyo iwe yaunoverengera iwe kwese kwaunoenda
Karim Hmeidan | | vaverengi
Ngatidzokerei ku gore 2006, gore ravakaita chimiro cheekutanga maReaders, izvo zvishandiso zvataigona nazvo verenga zviuru nezviuru zvemabhuku chero paine chinhu chimwe chete. Uye ndezvekuti kubvuta tekinoroji kwaive kwakakosha munyika yekuverenga mushure mekunge taona shanduko imwe chete mumisika yemimhanzi nemavhidhiyo nemidziyo iyo yakatibvumidza isu kushandisa zvemadhijitari zvemukati. Sony anga ari wekutanga kusvetuka pamusoro pechikwata, asi takakurumidza kutanga kuona ese mabrand anotevera sutu.
Magetsi inki yaive pano yekugara, inki iyo yaitibvumidza kuverenga tisinganete nemaziso edu uye izvo zvaibvumira michina kuzvitonga kuzere. Uye chaizvo nhasi tinoda kukuunzira iyo Kobo nyowani, iyo nyowani Kobo Libra H2O eReader. Chishandiso chitsva kubva kuraibhurari yeJapan Rakuten nacho Tinogona kuverenga kwese kwatinoenda tisingatyi kuti mudziyo unonyorova. Takambozviedza uye isu takatokuudza kuti yakakosha kwazvo. Mushure mekusvetuka tinokupa zvese zvese ...
1 Kobo Libra H2O, iyo isina mvura eReader iyo inodzoreredza mabhatani epanyama
2 Fambisa kuburikidza nebhuku pasina kurasikirwa neyakajairika tambo
3 Ichena, iro rinoyevedza kara reeReaders
4 Mabhuku kana ako aunofarira zvinyorwa nekutenda kuPocket
5 Kobo, raibhurari chaiyo yakauya kubva kune yepanyama nyika
6 Tenga iyo nyowani Kobo Libra H2O
Kobo Libra H2O, iyo isina mvura eReader iyo inodzoreredza mabhatani epanyama
Iyo Kobo Libra H2O ine chengetedzo inokwana kusvika kumazana matanhatu emabhuku, zvese zvinoenderana nesaizi yeizvi, zvinopfuura kukwana kwakaringana uchifunga zvidzidzo zvinosimbisa kuti paavhareji tinogona verenga muhupenyu hwedu avhareji yemabhuku ari pakati pe2000 ne4000 muhupenyu hwedu hwese.
Vakomana veKobo vaida kuwedzera skrini yeKobo Aura H2O, uye vanayo. Iyo Kobo Libra H2O inouya ne 7 inch screen, skrini yakakwana yekuverenga ese eBooks atinoda. Uye sezvatinokuudza, ndizvo impermeable. Ok, hazvidiwe kuti upinde mudziva kuti uverenge, asi chokwadi ndechekuti kudzivirirwa pamvura kunonakidza kwazvo munzvimbo idzo mudziyo unogona kunyorova. Ini ndinogona kufunga nezvenguva apo isu tiri panze tichiverenga uye mamwe madonhwe emvura anotanga kudonha, kana kana isu tiri mune zvakakomberedza dziva kana gungwa.
Iyo dhizaini shanduko ichienzaniswa neKobo Aura H2O, uye inounza dhizaini yakafanana chaizvo neKobo Forma, inotungamira eReader yekambani. Kunyange chiri chokwadi kuti haina dhizaini isina chimiro, iyo Kobo Libra H2O, inounza iyo mabhatani emuviri akafanana paKobo Forma ayo anotibvumidza kuturika peji, kana kuti dzokera kune yakapfuura, nenzira iri nyore pane kubata iyo yekubata (anti-kuratidza uye nechisarudzo che300 PPI) yechishandiso. Ichi chinhu chandakafarira zvakanyanya kubvira kuyedza mamwe maReaders chaive chinhu chandakanga ndichishaya nekuda kwekuti inonamira sei bata mascreen ari. Screen iyo nenzira ine mwenje wepamberi unogadzirisika uyo unotora kunyange sepia toni kuitira kuti maziso edu arege kuneta munzvimbo dzakaderera mwenje.
Fambisa kuburikidza nebhuku pasina kurasikirwa neyakajairika tambo
La Mudziyo UX, iyo software inofambira mberi, yakanaka, pasina chakanaka ichokwadi kuti unogona kugara uchivandudza. Kufambisa chishandiso iyo skrini inotenderera, chimwe chinhu chinonakidza kunyangwe Kobo inoda kukwenya mhinduro iyo inopa zvishoma. Izvozvowo zvinoenda mukudyidzana kwemamenyu, zvinoshanda mushe asi ini ndinofunga kuti neyakagadziriswa firmware ichavandudza.
Imwe yezvinhu zvitsva zveizvi Kobo Libra H2O inzira nyowani yekufambisa mune yekuverenga interface. Kune mabhuku asina mavambo kana magumo, kana kuti, izvo zvinokutendera iwe kuti uchinje iyo kuverenga kuverenga nekuti kubvunzana kwemapeji apfuura kana amangwana kunogona kuve kwakanaka. Kune izvi, iyo Kobo Libra H2O inotiratidza nguva yatinogona kufamba nayo kuburikidza nebhuku racho, tinogona kuita kusvetuka kusvika katatu mubhuku uyezve todzokera kunzvimbo yatiri. Chinhu chinonyanya kubatsira mune mamwe mabhuku andaida chaizvo.
Ichena, iro rinoyevedza kara reeReaders
Itsva Kobo Libra H2O tinogona kuiwana iri nhema uye chena, Ruvara rwavanotiudza rwakanunurwa kubva kune vekare mamodheru nekuzivikanwa kwakakurumbira. Uye ndeyekuti hazvisi zvese zvinofanirwa kuve zvitema ... Ruvara rwechigadzirwa rwatinogona kusanganisa nesarudzo ina dze Kurara kana chifukidzo chemidziyo nhema, grey, pink, uye aqua bhuruu (rakakwana ruvara rweKobo Libra H2O chena).
Mabhuku kana ako aunofarira zvinyorwa nekutenda kuPocket
Tinoda kuverenga, asi kwete mabhuku chete… Tiri kurarama munyika yekushandisa, uye kune akawanda uye akawanda mabloggi kana midhiya yatinoverenga muzuva redu rehupenyu hwezuva uye Kobo Libra H2O ndicho chishandiso chakaringana kushandisa aya marudzi ezvinhu.
Kutenda kwako kusangana nePocket, isu tinongofanirwa kusevha chero chinyorwa chatinoona pakombuta yedu kana nhare mbozha mune yakakurumbira kuverenga runyorwa sevhisi, ipapo ichazotorwa otomatiki kune yedu Kobo Libra H2O uye isu tichaona yakareruka vhezheni yechinyorwa pasina chero shambadziro iyo zvinotinetsa. Zvese izvi nemabhenefiti ekuverenga ayo eReader inotipa.
Kobo, raibhurari chaiyo yakauya kubva kune yepanyama nyika
Seizvo zita rayo rinoratidzira, iyi Kobo Libra H2O inobva kumhuri Kobo, chitoro chemabhuku chepamhepo chinotangira mune chitoro chemabhuku cheCanada ndiani aiziva kuita shanduko inoenda kune chaiyo nyika. Kusvika pamabhuku mazana matanhatu nemakumi matanhatu uye mabhuku ehurukuro ndizvo zvatinogona kuwana muchitoro cheKobo, manhamba akakwikwidzana asingazive kuti mukwikwidzi wako mukuru ane chii sezvo isingape data pane huwandu hwemabhuku avanazvo.
Uye chimwe chezvinhu chandaifarira zvakanyanya nezvaKobo ndechekuti ivo vanopa mukana kune vanyori vatsva, kana kuti kwete nyowani, kuzvishambadza ma eBook ako wega usingapfuuri nemuparidzi. Iyo nyowani bhizinesi modhi inoita kuti zvive nyore uye nyore kutaura nyaya uye kuita kuti vazivikanwe.
Tenga iyo nyowani Kobo Libra H2O
Unogona tora iyi nyowani Kobo Libra H2o kuburikidza nemutengesi mukuru we Rakuten Kobo kuSpain, Fnac, kana pawebsite yeKobo. Nhasi chave kutengeswa pamutengo we 179,99 euros, mutengo uyo kana tikazvienzanisa newawo (pamwe neakafanana maitiro) eiyo yekutengesa hofori yepamhepo, iyo Amazon Kindle Oasis, inokwikwidza zvakanyanya sezvo iri makumi manomwe emamiriyoni ezasi.
Saka unoziva, tinozvikurudzira here? Ehe. Icho chinhu chakanaka here kukwanisa kuverenga mabhuku edu atinofarira chero kwatinoenda? Ehe. Kana iwe uchitsvaga eReader iyo iwe yaunogona kuverenga nayo mudziva, pamhenderekedzo, pamubhedha, kana mune yekudyira, iyo Koko Libra H2O ndiyo yako yakakwana eReader.
Maketeni ekudzivirira haana kuiswa mumutengo
Plastiki inogona kutambura nekukanganisa kudonha
Iyo software inogona kuvandudzwa
Isina mvura uye inonyudza
Mabhatani epanyama adzoka pamusika weReader wekubata
Nyowani yekufambisa nzira mune yekuverenga interface
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Kobo Libra H2O, iyo-inotenderera yeReaders iyo iwe yaunoverengera iwe kwese kwaunoenda
Acer inopa yayo nyowani nyowani yeChbookbook mabhuku emabhuku kuIFA 2019
Maitiro ekubvisa mifananidzo kubva kumavhidhiyo paYouTube